OLA Tv Pro Apk Khuphela i-Android-Luso Gamer
I-OLA Tv Pro Apk Khuphela iWindows
Ngamana 11, 2021 Matshi 26, 2021 by Indlela yeShweta
Ndiyacinga ukuba zingakanani ii -apps eziyimfuneko ebantwini kuba ziyimithombo ephambili yolonwabo kule mihla. Ke ngoko, ndizise le "OLA Tv Pro Apk" ?? Iifowuni ze-Android ezikule webhusayithi.
I-lusogamer ihlala izama ukukholisa ababukeli bayo ngokuzisa izinto ezizodwa neziluncedo. Ke, unokukhuphela ifayile ye-Apk yamva nje ye-app kweli nqaku. Kwinqaku lanamhlanje, awuzukukhuphela kuphela isoftware kodwa unokufumana lonke ulwazi malunga naloo nto.
Ukuba unomdla kuyo kwaye ucinga ukuba iyonwabisa ngokwenene ungalibali ukuyabelana nabahlobo bakho.
Malunga ne-OLA Tv Pro
I-Ola Tv Pro Apk liqonga elikunika amawaka amajelo kamabonakude. Ke, yindlela onokuthi usasaze ngayo yonke imiboniso bhanyabhanya oyithandayo, iimovie, iindaba, ezemidlalo, kunye nezinye iinkqubo ezininzi ngqo kwiifowuni zakho.
Esi sicelo siwela kudidi lokusasaza kunye nosasazo.
Njengoko uyazi ukuba akunakwenzeka ukuqhuba iiseti zakho zikamabonwakude naphina nawe ke, abantu bakhetha ii-smartphones ukusasaza. Kungenxa yokuba ezi ntlobo zezixhobo kulula ukuziphatha kwaye ubukele izinto zakho ozithandayo.
Ineendlela ezingaphezulu kweshumi lamawaka ze-IPTV ezivela kwihlabathi liphela. Ukongeza, zonke iinkonzo zayo zisimahla ukuba zifumaneke kwaye akukho zintlawulo zibhaliswayo okanye enye into. Kufuneka nje uyifake, uyivule kwaye yiyo.
Uyazi ukuba ukubukela ubuninzi bezitishi kufuneka ufumane uqhagamshelo lwentambo okanye ufuna umabonwakude wesitya ohlawulelweyo. Kodwa nantsi imeko yahlukile njengoko unokufumana yonke into simahla ngevidiyo esemgangathweni ye-HD. Ngamanye amaxesha usenokuba uzibonele ukuba amajelo avela kwikhebula okanye izitya zibonelela ngemifanekiso esemgangathweni ophantsi.
Ke ngoko, ndicebisa ukuba usebenzise ii-smartphones kunye neetafile njengoseto lweTV. Ngoku, fumana i-OLA TV Pro Apk yokukhuphela ingxelo yokugqibela, kwaye uyifake kwiifowuni zakho emva koko ubone umlingo weso sicelo.
Unokuzikhuphelela i-OLA Tv ye-firestick, ii-PC okanye iilaptops. Kodwa kuya kufuneka ufake i-emulator kwi-PC yakho okanye kwiLaptop ukuba uzama ukufaka ifayile ye-Apk. Nangona kunjalo, kwiFirestick, awuyidingi ifayile eyongezelelweyo.
Ke, fumana nje i-Apk fayile kwaye uyifake ngokuthe ngqo njengoko ufaka ezinye ii-APK kweso sixhobo.
igama I-OLA TV Pro
ubungakanani 10.94 MB
Igama lepakheji com.olaolatv.iptvworld
Iyafuneka i-Android 4.1 kunye
Uyifaka njani i-OLA TV Pro?
Ndicinga ukuba akukho mfuneko yokuba ndikuxelele ukuba ungalukhuphela phi usetyenziso kodwa ndingakuxelela malunga nofakelo. Kuba ukuba ukweli phepha ke ndiqinisekile ukuba ungayifumana njani kwii-Android zakho.
Kodwa ngamanye amaxesha abantu bajongana nemicimbi kwinkqubo yofakelo. Ke ngoko, ndizamile ukuyicacisa le nkqubo ngokwenyathelo ngenyathelo lesikhokelo. Ke ndicebisa ukuba ulandele inyathelo ngalinye ngalinye.
Okokuqala, yiya esiphelweni sephepha emva koko ucofe kwiqhosha.
Ngoku, linda imizuzu embalwa njengoko ukhuphelo luya kugqiba kwimizuzu embalwa ukuba unonxibelelwano oluzinzileyo lwe-intanethi.
Ke xa ugqibile yiya kuseto ukhetho lweefowuni zakho.
Vula useto lokhuseleko.
Apho uza kubona ”S Imithombo Engaziwayo 'ke yijonge okanye uyivumele.
Vala olo seto kwaye ubuyele kwiscreen sasekhaya.
Qalisa uhlelo lokusebenza lokuhlola iifayile kwaye ufumane loo folda apho ukhuphele khona i-Apk.
Xa uyakufumana loo nqakraza ye-Apk kuyo okanye ucofe kuyo.
Emva koko uza kufumana ukhetho lwe ˜Install '.
Thepha / cofa kwiqhosha lokufaka kwaye ulinde imizuzwana emi-5 ukuya kweli-10.
Vula usetyenziso kwaye ukonwabele iitoni zeemovie ezimangalisayo, iinkqubo, uthotho, kunye nezinye iinkqubo.
Unokuba nomdla ekusebenziseni le app ilandelayo
I-OLA TV Pro Apk ikubonisa ngezinto ezininzi ezinomdla kunye nezibonelelo. Ndiyathemba ukuba uza kuzonwabela kwii-smartphones zakho. Ukuba ufuna ukuziva ngokwakho, tsiba eli candelo uye ngqo kwiqhosha elikhoyo ekugqibeleni kwaye ucofe kulo.
Emva koko i-Apk iya kuqala ukugcina kwizixhobo zakho. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukwazi ezo mpawu ungazijonga apha ngezantsi.
Kukho amawaka amajelo okusasaza bukhoma.
Unokufumana wonke umxholo kwincazelo ephezulu yevidiyo kunye nevidiyo.
Akukho mfuneko yobhaliso, ubhaliso okanye iintlawulo kuba konke kusimahla.
Unokuba nokuhamba ngokulula nangokulula ukufumana izinto ozifunayo ngokukhawuleza.
Ujongano kunye nolwakhiwo zilula kwaye ziyasebenziseka ukuze nabani na akwazi ukuyisebenzisa ngokulula.
Apho unomdlali owakhelweyo kodwa ungakhetha nabanye abadlali.
Ukwahlulahlulwa komxholo kuyamangalisa kwaye ungayifumana ngokulula into oyifunayo.
Ukunika ukhetho lokufumana izitishi ngokwamazwe abo.
Bukela iindaba ezinxulumene nemidlalo kunye nemidlalo ebukhoma kunye neetumente.
Ayinazo iintengiso ukuze ukonwabele ngaphandle kokuphazanyiswa kukucaphukisa iintengiso ezivelayo.
Akukho zixhobo zifihliweyo.
Unokufumana kwaye uphonononge ngakumbi kule app inye kwaye ingummangaliso.
Oku yayikukusebenza okukunika ukusasaza amajelo kamabonwakude aphathwayo kwiifowuni eziphathwayo ze-Android kunye neFirestick kunye neePC okanye iiLaptops. Njengoko benditshilo kufuneka ufake i-emulator eqhuba isoftware ye-Android kwiiPC kunye neeLaptops zokuqhuba le Apk.
Kodwa iFirestick okanye iiAmazon Smart TVs zineNkqubo yokuSebenza ye-Android, ke, ungayifaka ngokuthe ngqo kwezi zixhobo. Ke, ukuba ufuna ukukhuphela uguqulelo lwamva nje lwe-OLA Tv Pro ye-Android yakho cofa apha ngezantsi.
Nxibelelanisa ngokuthe ngqo ikhonkco
iindidi ukonwatyiswa tags I-OLA Tv Pro, I-OLA Tv Pro Apk, App ye-OLA Tv Pro Post yokukhangela
Final Fantasy VIII ye-Android kunye ne-iOS ngoku iyafumaneka
Dompet Kecil Apk Khuphela iWindows